Iindaba - Yintoni ibhegi yokuhlamba impahla?
Yintoni ibhegi yokuhlamba impahla?
Yintoni ibhegi yokuhlamba impahla? Umsebenzi wengxowa yokuhlamba iimpahla kukukhusela iimpahla, iibrasi kunye nempahla yangaphantsi ekubeni ibambeke xa uhlamba kumatshini wokuhlamba impahla, ukunqabe ukuguga, kunye nokukhusela iimpahla kwi-deformation. Ukuba iimpahla zineziphu zentsimbi okanye amaqhosha, ibhegi yokuhlamba iimpahla inokukuphepha ukonakalisa udonga lwangaphakathi kumatshini wokuhlamba. Ngokubanzi, iimpahla zangaphantsi zabasetyhini, ibra kunye nezinye izinto zoboya Impahla kufuneka ifakwe kwingxowa yokuhlamba impahla.
Okokuqala, ibhegi enemingxuma yokuhlamba yahlulwe yangamatye acocekileyo kwaye irhabaxa erhabaxa, kwaye ubukhulu umnatha yahlukile. Usebenzisa ibhegi entle yokuhlamba iimpahla iimpahla ezibuthathaka, kunye nengxowa enemigca erhabaxa ngezinto ezomeleleyo. Xa umatshini wokuhlamba usebenza, ukuhamba kwamanzi kwe-mesh erhabaxa kunamandla, ngoko kucocekile ngakumbi kunokusebenzisa ibhegi yokuhlamba impahla entle. Ukuba iimpahla azingcolanga kakhulu, kuyacetyiswa ukuba ukhethe umnatha ococekileyo.
Okwesibini, ibhegi yokuhlamba iimpahla inokwahlulwa-hlulwa kubumba obunye, umaleko ophindwe kabini kunye nolwahlu-ntathu, kwaye iimpahla zezinto ezahlukeneyo zibekwe zodwa. Iyakwazi ukwahlula isambatho ngasinye kwimpahla ukunciphisa ukungqubana kwefiber.
Okwesithathu, kukho iimilo ezahlukeneyo zeebhegi zokuhlamba iimpahla, kodwa kukho ukhetho olwahlukileyo ngokobungakanani beempahla. iingxowa zokuhlamba iimpahla ezimile okwe pilisi zilungele iimpahla zangaphantsi kunye ne-bra, iibhegi ezinxantathu ezina iimpahla zilungele iikawusi, iingxowa zokuhlamba iimpahla zezilungele iijezi, kwaye iingxowa zokuhlamba isikwere zilungele iihempe.
Ubungakanani be-mesh yebhegi yokuhlamba ikhethwe ngokobungakanani bokulunga kwelaphu lokuhlamba kunye nobungakanani bezinto ezikulo. Ngeempahla ezinemicu emincinci yelaphu, kungcono ukhethe ibhegi yokuhlamba enesingxobo esincinci, kunye nokuhonjiswa okukhulu, kunye neempahla ezinefayibha enkulu yelaphu, khetha ibhegi yokuhlamba enemingxuma emikhulu, efanelekileyo ekukhuseleni yeempahla.
Xa uhlamba imfumba yeempahla, enye yeempahla kufuneka ikhuselwe ngokukodwa, ngenxa yoko awunakukhetha ibhegi yokuhlamba enkulu kakhulu. Ingxowa encinci yokuhlamba iimpahla ilungele ngakumbi ukucocwa kunye nokukhuselwa kweempahla. Ukuba ufuna ukukhusela iingubo ezininzi ngexesha elinye, kuya kufuneka ukhethe ibhegi yokuhlamba enobukhulu obukhulu, kwaye ushiye indawo efanelekileyo emva kokubeka impahla, elungileyo yokuhlamba nokucoca impahla.